Orbitofrontal Cortex ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲခြင်း (၂၀၀၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
Orbitofrontal Cortex ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မူးယစ်ဆေးစွဲမှုပြဿနာ (2006)
ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ ဖေဖော်ဝါရီ 2006; 29 (2): 116-124 ။
ဇန်နဝါရီ 6, 2006 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.tins.2005.12.006
ဂျက်ဖရီ Schoenbaum,1,2 မဿဲ R. Roesch,1 နှင့် သောမတ်စ်အေ Stalnaker1
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience
အဆိုပါ orbitofrontal cortex, prefrontal cortex ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်, အလုပ်အမှုဆောင် function ကိုအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်။ သို့သော်ဤကျယ်ပြန့်ဒေသအတွင်း, အ orbitofrontal cortex ထိုကဲ့သို့သော basolateral amygdala နှင့်နျူကလိယ accumbens အဖြစ်အရေးပါ subcortical ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှု node များနှင့်အတူဆက်သွယ်မှု၎င်း၏ထူးခြားသောပုံစံအားဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ ဤအဆက်သွယ်မှု၏သီလအားဖြင့်, အ orbitofrontal cortex ထူးခြားအနာဂတ်မှာသို့ပရောဂျက်များနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များလမ်းပြရိပ်မိသို့မဟုတ်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များ၏တန်ဖိုးသုံးစွဲဖို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့နေရာချထားသည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံပါတယ်နှင့်ဤအချက်ပြမှု၏အရှုံးအဲဒီဦးနှောက်ကိုဆားကစ်အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကို၏ရလဒ်အဖြစ်, မူးယစ်ဆေးစွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သော maladaptive ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့အကောင့်အံ့သောငှါသက်သေအထောက်အထားဆနျးစစျမညျဖွစျကွောငျးမကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
ခါနီးဖြစ်ရပ်များ၏လိုလားသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကိုအကြောင်းကိုမျှော်လင့်ချက်များဖွဲ့စည်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စွမ်းရည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနှင့်အပြုအမူများစွာအခြေခံ။ တကယ်တော့နှစ်ခုကျယ်ပြန့်တဲ့ functions လိုအပ်နေပြီလို့ထိုကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်များများဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့် subserved နေကြသည်။ တဖကျတှငျမူမျှော်လင့်ချက်များကျွန်တော်တို့ကိုရည်မှန်းချက်တွေနဲ့အလားအလာအန္တရာယ်ရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့ချက်ချင်းအပြုအမူကိုလမ်းညွှန်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, မျှော်လင့်ချက်အနာဂတ်အပြုအမူကိုပိုပြီးသပ္ပါယ်ဖြစ်လာနိုင်အောင်သင်ယူမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အမှန်တကယ်ရလဒ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုနှစ်ယောက်စလုံးကနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်များနှင့်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်နှင့်လက်ရှိရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစည်းနိုင်နိုင်အောင်မျှော်မှန်းထားသည်ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်များမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာထိန်းသိမ်းထားမည်အကြောင်းလိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော Integrated ဖြစ်စဉ်ကိုကျနော်တို့အနေနဲ့ရလဒ်ကိုမျှော်မှန်း, တိကျတဲ့အက်ဥပဒေကိုလိုက်နာဖွယ်အကျိုးဆက်များအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုမှုရည်ညွှန်းဖို့သဘောတရားပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာသင်ယူနေဖြင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုတဲ့အသုံးအနှုန်း [အဖြစ်ရည်ညွှန်းပါလိမ့်မယ်တဲ့ signal ကိုထုတ်ပေး1] ။ ထိုကဲ့သို့သော signal ကို၏နှောင့်အယှက်သပ္ပါယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များကနေသင်ယူဖို့နှစ်ဦးစလုံးနိုင်စွမ်းအတွက်အခက်အခဲတစ်ခုများပြားလှကိုဖန်တီးရန်မျှော်လင့်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုတှငျကြှနျုပျတို့ပထမဦးဆုံး orbitofrontal cortex (OFC) ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား၏မျိုးဆက်နှင့်အသုံးပြုမှုအတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍကြောင်းမကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုဖော်ပြရန်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျနော်တို့မူးယစ်ဆေးစွဲသွင်ပြင်လက္ခဏာများသော maladaptive ဆုံးဖြတ်ချက်များ, စိတျအပိုငျး၌, OFC အတွက်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်ဦးနှောက်ဧရိယာများ၏ရလဒ်အဖြစ်ဤအချက်ပြမှုတစ်ခုပြတ်တောက်ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းမကြာသေးမီကအထောက်အထားများကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
အဆိုပါ OFC နှင့် OFC-မှီခိုအပြုအမူအတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား၏မျိုးဆက်အတွက် OFC ၏အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကိုရောင်ပြန်ဟပ်
[ကြောင့်အခြားသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခြယ်လှယ်ပြီးတော့အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့စွမ်းရည်အမျိုးမျိုးအလုပ်လုပ်, Scratchpad သို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ဖော်ပြထားခဲ့ပြီးထိုသို့ prefrontal cortex အပေါ်လိုအပ်နေပြီလို့မူတည်2] ။ အဆိုပါ prefrontal cortex အတွင်း, အ OFC, limbic ဒေသများနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှုအသုံးပြုပုံထူးခြားကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်ဝင်ရောက်ဖို့ရလဒ်များသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များနှင့် ပတ်သက်. ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ကို enable ရန်နေရာ (ထောင့်ကွက် 1) ။ အမှန်စင်စစ်လေ့လာမှုများတစ်ဦးတိုးပွားလာရလဒ်များများ၏မျှော်လင့်ထားသည့်တန်ဖိုးတစ်ခုအာရုံကြော Correlate ပစ္စုပ္ပန်နှင့်ဖြစ်ကောင်း OFC အတွက်ထုတ်ပေးကြောင်း။ အကြံပြု မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်ကို၏တန်ဖိုးပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ်ကယ်နှုတ်မရသောအခါဥပမာ, လူ့ neuroimaging လေ့လာမှုများ [လည်းမျှော်မှန်းထားသည်ရလဒ်များ၏မျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်း OFC အတွက်သွေးစီးဆင်းမှုအပြောင်းအလဲများပြ3-6] ။ ဤသည်ကို Activation [ဤပစ္စည်းများကို၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးကိုရောင်ပြန်ဟပ်မှပေါ်လာသည်နှင့်သတင်းအချက်အလက်ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလမ်းပြဖို့အသုံးပြုခံရသောအခါစောင့်ကြည့်လေ့လာဖြစ်ပါတယ်7] ။ ဤရလဒ်သည်ထိုကဲ့သို့သောသတင်းအချက်အလက်များလုပ်ငန်းများ၌ဖြစ်ပါတယ်အခါ OFC အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤအရလဒ်များ၏မက်လုံးပေးတန်ဖိုးများကိုထင်ဟပ်ဟောကိန်းထုတ်ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်တိုးမြှင် precedes သော OFC အတွက်ထို့ကြောင့်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု [8-11] ။ မျောက်ကွဲပြားခြားနားနှစ်သက်သောဆုလာဘ်နှင့်အတူတွဲအမြင်အာရုံတွေကိုနှင့်အတူပေးအပ်ကြသောအခါဥပမာ, ပု OFC မီးထဲမှာအာရုံခံရွေးချယ်သည့်မျှော်လင့်ရလဒ်ကိုကြောင်းစမ်းသပ်လုပ်ကွက်အတွင်းနှစ်သက်သောသို့မဟုတ် Non-နှစ်သက်သောချသောဆုဖြစ်၏ရှိမရှိနှင့်အညီ  ။ ထိုမှတပါး, Roesch နှင့် Olson  မကြာသေးမီက OFC အတွက်ပစ်ခတ်ရလဒ်ကိုတန်ဖိုးအများအပြားသည်အခြားတိကျသောမက်ထရစ်ခြေရာခံကြောင်းသရုပ်ပြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, အာရုံခံ [၎င်း၏မျှော်မှန်းအရွယ်အစားပေါ် မူတည်. တစ်ဦးအကျိုးသည်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းနှင့်မသင့်လျော်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်ချေဆန္ဒရှိအကျိုးဆက်များရရှိရန်လိုအပ်သောမျှော်လင့်အချိန်ပစ်ခတ်11,12].
ထောင့်ကွက် 1 ။ ကြွက်များနှင့်မျောက်ဝံများအတွက် orbitofrontal ဆားကစ်၏ခန္ဓာဗေဒ
နှင်းဆီနှင့် Woolsey  prefrontal cortex ဟာ mediodorsal thalamus (MD) ၏စီမံကိန်းကြောင့်ထက် '' stratiographic နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် '' နေဖြင့်သတ်မှတ်ခံရအံ့သောငှါအဆိုပြုထား  ။ ဤသည်နှင့်အဓိပ္ပါယ်မျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီး prefrontal homologs သတ်မှတ်သည့်အပေါ်တစ်ဦးအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့အမှန်တကယ် (ဤ box ၏ပုံငါ) homologous ဒေသများသတ်မှတ်သောအလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒတူညီသည်။
ကြွက်များတွင်, MD သုံးအစိတ်အပိုင်းများသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည် [55,56] ။ အဆိုပါ MD ၏ medial နှင့်ဗဟို segments များထံမှ projections [ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းဧရိယာများပါဝင်သည်တစ်ဒေသနှင့် ventral နှင့် dorsal agranular နောက်ကျနေခဲ့သည် cortical သတ်မှတ်55-58] ။ ကြွက်များတွင် MD ၏ဤဒေသများ amygdala ကနေတိုက်ရိုက် afferents, medial ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး, ventral pallidum နှင့် ventral tegmental ဧရိယာကိုလက်ခံရရှိ, သူတို့ Piriform cortex ကနေ olfactory input ကိုလက်ခံရရှိ [55,56,59] ။ ဆက်သွယ်မှု၏ဤပုံစံမျောက်ဝံများအတွက် Orbital prefrontal subdivision သတ်မှတ်ပါတယ်ထားတဲ့မျောက် MD ၏ medially တည်ရှိပြီး, magnocellular ဌာနခွဲ, ၏ဆင်တူသည် [60-62] ။ ထို့ကြောင့်ကြွက် prefrontal cortex ၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းဧရိယာထဲမှာတစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောဒေသကြောင်းရောက်ရှိမျောက် Orbital prefrontal cortex ရန်အလွန်ဆင်တူကြောင်း thalamus ဆီက input ကိုလက်ခံရရှိရန်ဖွယ်ရှိသည်။ အခြေပြု, တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းထဲမှာ input ကိုကဒီပုံစံပေါ်တွင်ကြွက် prefrontal cortex ၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် agranular နောက်ကျနေခဲ့သည်ဒေသများရှိ medial နှင့်ဗဟို MD ၏အနာဂတ်လယ်ကွင်း [အဆိုပါမျောက် orbitofrontal ဒေသမှ homologous အဖြစ်အဆိုပြုထားပြီ55,57,63-65] ။ ကြွက်များတွင်ဤဒေသများအတွက် dorsal နှင့် ventral agranular နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex, နှင့်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်တို့ပါဝင်သည်နှင့် Orbital ဒေသများ ventrolateral ။ ကြွက် orbitofrontal cortex (OFC) ၏ဤသည်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းကမ္ဘာ၏အနောက်ဘက်ခြမ်း၏ medial မြို့ရိုးကိုလျှောက်တွင်အိပ်သော, အ medial ပါဝင်သည်သို့မဟုတ် Orbital cortex ventromedial မထားဘူး။ ဒီဒေသဟာ MD နှင့် medial မြို့ရိုးပေါ်မှာအခြားဒေသများမှပိုပြီးဆင်တူအခြားဒေသများနှင့်အတူဆက်သွယ်မှု၏ပုံစံများရှိပါတယ်။
အခြားအရေးကြီးဆက်သွယ်မှုကြွက် OFC နှင့်မျောက် OFC အကြားတူညီမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်အများဆုံးမှတ်သားလောက်သည့် amygdala (ABL) ၏ basolateral ရှုပ်ထွေးသော, သင်ယူခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်စေသို့မဟုတ်စိတ်ခွန်အားနိုးရှုထောင့်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ထင်နေတဲ့ဒေသ [အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများမှာ66-74] ။ မျောက်ခုနှစ်တွင်ဤဆက်သွယ်မှု [သည့် OFC ဒါမှမဟုတ် ABL ဖြစ်စေပျက်စီးမှုကနေရရှိလာတဲ့အပြုအမူမူမမှန်တိကျတဲ့တူညီရှင်းပြဖို့မဖြစ်၏ပြီ14,17,75-77] ။ ကြွက် OFC, အထူးသဖြင့် agranular နောက်ကျနေခဲ့သည် cortex အတွင်း basolateral amygdala နှင့်ဒေသများအကြားအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှု [58,78-80] ဤအဆောက်အဦများအကြားအပြန်အလှန်ကြွက်များတွင်အမူအကျင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏စည်းမျဉ်းများအတွက်အလားတူအရေးကြီးသောဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ကြွက်များနှင့်မျောက်ဝံများနှစ်ဦးစလုံးအတွက် OFC [ထိုကဲ့သို့သော ABL နှင့် subiculum အဖြစ် limbic အဆောက်အဦထဲကနေ innervation နှင့်အတူထပ်, အနျူကလိယ accumbens တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့ efferent စီမံကိန်းကိုပံ့ပိုး81-84] ။ အဆိုပါ OFC, limbic အဆောက်အဦများနှင့်နျူကလိယ accumbens ဆက်သွယ်ထားသောသီးခြား circuitry [သည့် forebrain ဤအဓိကအစိတ်အပိုင်းများအကြားအလုပ်လုပ်တဲ့ interaction ကအတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှတူညီအကြံပြုကြောင်းမျိုးစိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတဲ့ဒီကဗျာအပြိုင်တင်ဆက်81,84,85].
ကြွက်များနှင့်မျောက်များအတွက် OFC (အပြာ) ၏ခန္ဓာဗေဒဆက်ဆံရေး။ အဆိုပါ mediodorsal thalamus (အစိမ်းရောင် MD,), amygdala (လိမ္မော်ရောင်) နှင့် striatum (ပန်းရောင်) နဲ့ဆက်သွယ်မှုသူတို့ရဲ့ပုံစံအပေါ်အခြေခံပြီးကြွက် prefrontal cortex အတွက် Orbital နှင့် agranular နောက်ကျနေခဲ့သည်ဒေသများအတွက်မျောက် OFC မှ homologous ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်မှာ OFC အဆိုပါ amygdala ကနေအာရုံခံ cortical နှင့်ဖွဲ့စည်းသတင်းအချက်အလက်ကနေကြံ့ခိုင် input ကိုလက်ခံရရှိ, နှင့် striatum မှတဆင့်မော်တာစနစ်လက်ငင်းပေးပို့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသေတ္တာတစ်ခုကိုယ်စားပြု Coronal အပိုင်းဖော်ပြသည်။ အပိုဆောင်းအတိုကောက်: Aid, insula agranular dorsal; AIv, ventral agranular insula; က c အလယ်ပိုင်း; CD ကို, caudate; LO, နှစ်ဦးနှစ်ဖက် Orbital; မီတာ, medial; NAc, နျူကလိယ core ကို accumbens; rABL, rostral basolateral amygdala; ventrolateral နှင့် ventromedial Orbital ဒေသများအပါအဝင် Orbital ventral VO, VP, ventral pallidum ။
ထိုသို့သော anticipatory လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ရပ်များတစ် sequential အတွက်ဖြစ်ပေါ်ရသောအများအပြားတာဝန်များကိုဖြတ်ပြီး OFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုပစ်ခတ်တစ်ဘုံအင်္ဂါရပ်ဖြစ်ပေါ်လာသောနှင့်အရှင်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း, အမိန့် (ထောင့်ကွက် 2) ။ အရေးကြီးတာက, သို့သော်ဤရွေးချယ်တုံ့ပြန်မှုတစ်စုံတစ်ရာအချက်ပြတွေကိုမရှိခြင်းအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်, နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအထူးသဖြင့်တွေကိုတိကျတဲ့ရလဒ်ခန့်မှန်းကြောင်းလေ့လာသင်ယူအဖြစ်သူတို့ဝယ်ယူနေကြသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဒီရွေးချယ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရလဒ်များ၏အတွေ့အကြုံ, အပေါ်အခြေခံပြီး, တိရစ္ဆာန်၏မြော်လင့်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဤအင်္ဂါရပ်များတွင်သရုပ်ဖော်ကြသည် ပုံ 1သူတို့သင်ယူဝတ္ထုအနံ့-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပြဿနာများ reverse အဖြစ်ကြွက်တှငျမှတျတမျးတငျထားသ OFC အာရုံခံ၏လူဦးရေတုံ့ပြန်မှုကိုပြသပေးသော [8,9,13] ။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မှာကြွက်အခြားအနံ့ပြစ်ဒဏ်ခန့်မှန်းသော်လည်းတဦးတည်းအနံ့, အနီးအနားရှိအရည်ကောင်းစွာအတွက်ဆုလာဘ်ခန့်မှန်းကြောင်းလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ အစောပိုင်းလေ့လာသင်ယူမှုအတွက် OFC အတွက်အာရုံခံတဦးတည်းမှမဟုတ်အခြားရလဒ်ကိုတုံ့ပြန်ကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အဆိုပါအာရုံခံလည်းသူတို့ရဲ့ဦးစားပေးရလဒ်ကိုအတွက်မျှော်တုံ့ပြန်ရန်စတင်။ လေ့လာမှုအများအပြားကျော်, အ OFC အတွက်အာရုံခံ၏ 15-20% sucrose သို့မဟုတ်ကွီနိုင်တင်ဆက်မှုဖြစ်စေ၏မျှော်လင့်အတွက်ပစ်ခတ်, ဒီတာဝန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုဖွံ့ဖြိုး [8,9,13] ။ ဒီအာရုံကြောလူဦးရေအတွက်လှုပ်ရှားမှုကျနော်တို့ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်အဖြစ်ဤနေရာတွင်သတ်မှတ်အရာကိုအတွက်ထိန်းသိမ်းထားသည့်မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များ၏တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်။
ထောင့်ကွက်2။ Orbitofrontal လှုပ်ရှားမှုခါနီးဖြစ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးတစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော signal ကိုပေးသည်
အဆိုပါ orbitofrontal cortex (OFC) ကြိုတင်ခန့်မှန်းပြီးတော့အနာဂတ်ဖြစ်ရပ်များ၏တန်ဖိုးအချက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ကောင်းစွာ positive ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏အဓိကစာသားကိုဒီ signal ကိုခွဲထုတ်ဖို့ဆုလာဘ်မတိုင်မီနှောင့်နှေးကာလအတွင်းမှာလှုပ်ရှားမှုအပေါ်အာရုံစိုက်ပေမယ့်, ဒီငြင်းခုံ၏ယုတ္တိတိုးချဲ့မှု OFC အတွက်လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်တစ်လျှောက်လုံးဒီ signal ကို encodes သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ထို့ကြောင့် OFC လက်ရှိပြည်နယ်၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုပေါ်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအောက်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်နိုင်သမျှသင်တန်းများကိုတစ်ဦးအပြေးဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပေးပါသည်။
ဤသည်မှာအခန်းကဏ္ဍဆုလာဘ်သို့မဟုတ်ပြစ်ဒဏ်၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုနမူနာစဉ်အတွင်း OFC အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းထင်ရှား၏ [86-88] ။ ဥပမာအားဖြင့်, ကြွက်လေးအနံ့ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည့်အတွက်တစ်ရှစ်အနံ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်, ဖျော်ဖြေဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းနှင့်လေးအနံ့ Non-ဆုလာဘ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြ, OFC အာရုံခံပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကထက်အနံ့တွေကို The Associated အရေးပါမှုကလွှမ်းမိုးခဲ့သည် အမှန်တကယ်အနံ့အထောက်အထားတွေကို  ။ အနံ့ဝိသေသလက္ခဏာဆီလျှော်ထားလျှင်အမှန်စင်စစ် OFC အာရုံခံအဆိုပါ cue ၏ဤအာရုံခံအင်္ဂါရပ်ကိုလျစ်လျူရှုပါလိမ့်မယ်။ ဒါက [Ramus နှင့် Eichenbaum ခြင်းဖြင့်သရုပ်ပြခဲ့သည်89] ဆုလာဘ်နဲ့ဆက်စပ်သက်ဆိုင်ရာဆောက်လုပ်ရေးအနံ့ဝိသေသလက္ခဏာမဟုတ်သောအရာတစ်ခုရှစ်အနံ့စဉ်ဆက်မပြတ်နှောင့်နှေး Non-ပွဲစဉ်-to-နမူနာတာဝန်, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲအပေါ် cue အကြား '' ပွဲစဉ် 'သို့မဟုတ်' 'Non-ပွဲစဉ်' 'နှိုင်းယှဉ်ပေါ်ကြွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားတဲ့သူ လက်ရှိနှင့်တရားခွင်ရှေ့။ သာ 64% ကိုအနံ့တရွေးချယ်ပစ်ခတ်သော်လည်းသူတို့က, အတုံ့ပြန်မှုအာရုံခံ၏ 16% ကဒီပွဲစဉ်-Non-ပွဲစဉ်နှိုင်းယှဉ်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
cue-ရွေးချယ်ပစ်ခတ်ရန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding ကအဖြစ်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူထားပြီးဖြစ်သော်လည်း, ကြှနျုပျတို့သညျဤအာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအမှန်တကယ်တိရိစ္ဆာန်တို့ကအလားအလာရလဒ်များ၏ဖြစ်ပွားနေသောအကဲဖြတ်ကိုကိုယ်စားပြုကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ဤအာရုံခံ၏ရွေးချယ်ပစ်ခတ်ရန်ရိုးရှင်းစွာတိကျတဲ့ cue ယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိတ်ထဲမှာအထူးသဖြင့်ရလဒ်နှင့်ဆက်စပ်ပေမယ့်အစားအကြောင်းဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ပေါ်သရုပ်ဆောင်အကြောင်း, လက်ရှိအခွအေနပေးသောတိရစ္ဆာန်၏တရားစီရင်ခြင်းကိုထင်ဟပ်, လိမ့်မည်လျက်ရှိသည်ဟူသောအချက်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူး အနာဂတျတှငျကြောင်းရလဒ်ကိုဦးတည်သွားစေ။ ဤသည်တရားသဖြင့်စီရင်ပြည်တွင်းရေးရည်မှန်းချက်များသို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒများကိုမှဆွေမျိုးကြောင်းတိကျတဲ့ရလဒ်၏တန်ဖိုးအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသည်ဤမျှော်လင့်ချက်များအဆက်မပြတ် updated နေကြသည်။ ထို့ကြောင့် OFC အတွက်ပစ်ခတ်ရန်အနှစ်သာရအတွက်ပြည်နယ်တစ်မူလတန်းစစ်ကူသို့မဟုတ်ရိုးရိုးကြောင့်အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်ကိုဦးတည်နေတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်တုန့်ပြန်ပေးသောထုတ်ပေးပါလိမ့်မည်သောနောက်ဆက်တွဲပြည်နယ်၏မျှော်မှန်းတန်ဖိုးထက်ထင်ဟပ်။ ဒီအဆိုပြုချက်ကိုနှင့်ကိုက်ညီသည်စာပေ၏သုံးသပ်ချက်ကိုသူတို့အနာဂတ်ဆုလာဘ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကို (ဤ box ၏ပုံငါ) အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးလျှင် OFC အတွက် encoding ကယုံကြည်စိတ်ချရသောတောင်မှအမှန်တကယ်ဆုလာဘ်ပေးပို့မှဖယ်ရှားပစ်သူများ, များစွာသောဖြစ်ရပ်များခွဲခြားကြောင်းပြသထားတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, အနံ့-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုလေ့ကျင့်ရေးအတွက်, OFC အာရုံခံအနံ့နမူနာ precedes သောနှာခေါင်း-Poke အတွက်မျှော်ပစ်ခတ်။ ဤအအာရုံခံများ၏တုံ့ပြန်မှု [မကြာသေးမီစမ်းသပ်မှုတွေ၏ရှိမရှိအဆိုပါ sequence ကိုအညီမတူ87,90] သို့မဟုတ်အရပျ  ဆုလာဘ်တစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ရုံးတင်စစ်ဆေးဖြစ်ရပ်များ၏မျှော်လင့်အတွက် OFC အတွက်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှု။ ကြွက် OFC အတွက်အာရုံခံရှစ်အနံ့, Go-NoGo အနံ့-ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကာလအတွင်းမှတ်တမ်းတင်ထားသောခဲ့ကြသည်။ လေးကွဲပြားခြားနားသော orbitofrontal အာရုံခံအတွက်လှုပ်ရှားမှုလေးခုကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်တခုကိုဖြစ်ရပ်များမှညှိ, ပြသ (က-ဃ)။ Activity ကိုထိပ်မှာတစ်ဦးချင်းစီ panel ကို၏အောက်ဆုံးမှာအနီးအနားဖြစ်ရပ်အချိန် Histogram အဖြစ်အကြောင်းအရာအကြမ်း format နဲ့ပြသသည်, အသီးအသီးပုံကျော်တံဆိပ်များရေ Poke (Wat-POK) သို့မဟုတ်ရေဖြန့်ဝေ, အနံ့စတင်ခြင်း (OD-ON), အနံ့ (OD-POK) ပြီးမှ, အ synchronous ဖြစ်ရပ်ကိုညွှန်ပြခြင်းနှင့်အလင်းစတင်ခြင်း (LT-ON) မတိုင်မီသို့မဟုတ်အပြီးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဆိုဖြစ်ရပ်များ (Wat-DEL) ။ တောလည်ရာ (စမ်းသပ်မှုတွေအရေအတွက်ညွှန်ပြn) နှင့်ဒုတိယနှုန်း spikes အရေအတွက်။ အဆိုပါလေးအာရုံခံတစ်ခုချင်းစီကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားဖြစ်ရပ်တွေနဲ့အသင်းအဖွဲ့အတွက်ပစ်ခတ်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအာရုံခံဆဲလျမှာရှိတဲ့ပစ်ခတ်ကြောင်းအဖြစ်အပျက်၏မျှော်လင့်အတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ [ထံမှခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအဆင်ပြေအောင်87].
အဆိုပါ orbitofrontal cortex အတွက်ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား၏အချက်ပြ။ Black ကအရက်ဆိုင် Post-စံနှုန်းအဆင့်အတွက်အာရုံခံ၏ဦးစားပေးရလဒ်ကိုပါဝင်သောစမ်းသပ်မှုတွေအပေါ်တုန့်ပြန်ပြပါ။ White ကအရက်ဆိုင် non-လိုလားသောရလဒ်ဖို့တုန့်ပြန်ပြပါ။ Activity ကိုညှိနေသည် ...
လေ့လာပြီးနောက်ဤအာရုံခံအားဖြင့်တစ်တုံ့ပြန်မှုကိုဖန်ဆင်းပင်ရှေ့တော်၌ထိုမျှော်လင့်ထားသောရလဒ်ကိုပြ, သူတို့ရဲ့ဦးစားပေးရလဒ်များကြိုတင်ခန့်မှန်းသောတွေကိုအားဖြင့် activated ခံရထံသို့လာကြ၏။ ဤသည်၌တင်ပြလူဦးရေတုံ့ပြန်ထင်ရှား၏ ပုံ 1အဆိုပါအာရုံခံလူဦးရေရဲ့ဦးစားပေးရလဒ်ကိုခန့်မှန်းသောအနံ့ cue တုံ့ပြန်အတွက်လေ့လာပြီးနောက်အဆင့်မြင့်လှုပ်ရှားမှုထားပါတယ်ရာ။ ဤရွေ့ကားအချက်ပြမှုများတိရစ္ဆာန်တွေကိုမှတုံ့ပြန်မှုကိုလမ်းပြဖွယ်ရှိရလဒ်များ၏မျှော်လင့်ချက်များသုံးစွဲဖို့နဲ့မျှော်မှန်းချက်ကိုချိုးဖောက်ကြသောအခါသင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ OFC ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားပြနေဖြင့်အပြုအမူလမ်းညွှန်သောအယူအဆအပြုအမူအပေါ် OFC ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဤရွေ့ကားသက်ရောက်မှုသင့်လျော်သောတုံ့ပြန်မှုရိုးရှင်းသောအသင်းအဖွဲ့များကို အသုံးပြု. မရွေးမရနိုင်သည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ထင်ရှားသော်လည်း, အစားအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပေါင်းစပ်ခံရဖို့ဒါမှမဟုတ်အခြားရွေးချယ်စရာတုံ့ပြန်မှုများအကြားနှိုင်းယှဉ်ခံရဖို့ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ, OFC ပျက်စီးမှုနှင့်အတူလူသားမြားသညျ [သင့်လျော်စွာဟာအိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်မှာသူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များအပေါ်အခြေခံပြီးအပြုအမူကိုလမ်းညွှန်နိုင်ရင်14] ။ ဒီတာဝန်များတွင်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးဆုလာဘ်နှင့်ကတ်များအပေါ်ကိုယ်စားပြုပြစ်ဒဏ်များနှင့်အတူကဒ်များကုန်းပတ်ကနေရှေးခယျြရမညျဖွစျသညျ။ အကျိုးရှိရွေးချယ်မှုစေရန်, ဘာသာရပ်များအချိန်ကျော်ကဤကွဲပြားဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များ၏တန်ဖိုးပေါင်းစည်းနိုင်ဖြစ်ရပါမည်။ OFC ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီအစပိုင်းတွင်သူတို့ဆုလာဘ်အရွယ်အစားအရသိရသည်တိုက်ရိုက်အပြုအမူဖို့ရိုးရှင်းတဲ့အသင်းအဖွဲ့များကိုသုံးနိုင်သည်ကြောင်းညွှန်ပြ, မြင့်မားတဲ့ဆုလာဘ်သီးကိုသီးသောကုန်းပတ်ကိုရှေးခယျြ; သို့သော်သူတို့ကုန်းပတ်အတွက်ရံဖန်ရံခါကြီးမားသောပြစ်ဒဏ်များကိုထင်ဟပ်ဖို့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပြုပြင်မွမ်းမံရန်ပျက်ကွက်။ ဒီမျှော်လင့်ထား၏ချိုးဖောက်မှုများ (ရံဖန်ရံခါပြစ်ဒဏ်များ) မှအသိအမှတ်ပြုနိုင်နိုင်အောင်ရံဖန်ရံခါအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်, ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အလားအလာပြစ်ဒဏ်များတစ်ဦးရှေးခယျြမှုလုပ်ပြီးနောက်ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်အတွက်မျှော်မှန်းရလဒ်၏တန်ဖိုးနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ထားတဲ့စွမ်းရည်အားဖြင့် facilitated မည်ဖြစ်သည်။ ဤသည်လိုငွေပြမှု [သည့် OFC ပျက်စီးမှုပြီးနောက်ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသားတွေအတွက်သရုပ်ပြယင်းမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လိုငွေပြမှုမှအလားတူပင်ဖြစ်သည်15-21].
ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်ထဲမှာမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်များကျင်းပရန်ဤသည်စွမ်းရည်ကိုလည်း [ဘာသာရပ်များဖြစ်နိုင်ခြေ၏ကွဲပြားအဆင့်ဆင့်မှာပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်ဟောကိန်းထုတ်နှစ်ခုလှုံ့ဆော်မှုများအကြားရွေးချယ်မှုဖန်ဆင်းထားတဲ့အတွက်လတ်တလောလေ့လာမှုမှာပျေါခဲ့သ22] ။ ဤလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ဘာသာရပ်များသူတို့မရွေးဘူးသောရလဒ်ကို၏တန်ဖိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတုံ့ပြန်ချက်ပေးထားခဲ့ကြသည်။ ပုံမှန်ဘာသာရပ်များသူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှု modulate ဖို့နဲ့အနာဂတ်စမ်းသပ်မှုတွေအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုအောင်သင်ယူဖို့ဒီတုံ့ပြန်ချက်ကိုအသုံးပြုရန်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်သူတို့ကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ရှောင်ရှားခဲ့ကွောငျးကိုသိကြသောအခါထိုသူတို့ပျြောရှငျစေတော်မူ၏။ OFC ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကိုသူတို့ရှေးခယျြထားသောဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်များမှပုံမှန်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှုပြသ; သို့သော်မရွေးရသေးရလဒ်ကိုအကြောင်းကိုတုံ့ပြန်ချက်ဖြစ်စေအပေါ်သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏နောက်ဆက်တွဲစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်အဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ခဲ့ရသည်။ သောသူတို့သည်အကျိုးကိုရရှိခဲ့သည့်အခါသူတို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့မပါသူတို့မှာလည်းကြီးမားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ရှောင်ရှားခဲ့ကွောငျးအသိပေးခံခဲ့ရသည်လျှင်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာချွတ်ယွင်းကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားနှိုင်းယှဉ်ဖို့ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်အတွက်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် OFC များအတွက်အခန်းကဏ္ဍနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ဒီ signal ကိုမရှိရင်တစ်ဦးချင်းစီရွေးချယ်ထားခြင်းနှင့်မရွေးရသေးရလဒ်များ၏ဆွေမျိုးတန်ဖိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်အရှင်စိတ်ခံစားမှုတုံ့ပြန်မှု modulate နှင့်သင်ယူမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဤနှိုင်းယှဉ်သတင်းအချက်အလက်သုံးစွဲဖို့ပျက်ကွက်လို့မရပါဘူး။
ဤဥပမာထုတ်ဖော်နေကြသော်လည်း, ဆုံးဖြတ်ချက်ချလမ်းပြရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားထုတ်လုပ်အတွက် OFC ၏အရေးပါအခန်းကဏ္ဍ၏တစ်ဦးထက်ပို-တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြစစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်များကိုကနေလာပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတာဝန်များကိုအနေနဲ့မျှော်မှန်းရလဒ်၏တန်ဖိုးတစ်ခုပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုမှုနေဖြင့်အပြုအမူများ၏ထိန်းချုပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်။ ဥပမာ, ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခု Pavlovian ဗားရှင်း (ပုံ 2), ကြွက်ပထမဦးဆုံးအစားအစာနှင့်အတူတစ်ဦးအလင်း cue ပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။ တုံ့ပြန် conditional အလင်းကိုထူထောင်ပြီးနောက်အစားအစာ၏တန်ဖိုးနာမကျန်းအတူကချိတ်တွဲခြင်းဖြင့်လျှော့ချဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါအာကာသယာဉ်ကိုစမ်းသပ်ထဲမှာ, အလင်း cue non-ဆုခခြံသုဉ်း session ကိုနောက်တဖန်တင်ပြနေပါတယ်။ အစားအစာ-နာမကျန်းဒဿနိကဗေဒကိုလက်ခံရရှိကြောင်းတိရစ္ဆာန်များ Non-devalued ထိန်းချုပ်မှုပြုပါထက်အလင်း cue မှလျော့နည်းတုံ့ပြန်ကြသည်။ အရေးကြီးတုံ့ပြန်၌ဤကျဆင်းခြင်းအဲဒီ session ရဲ့ start ကနေထငျရှားနှင့် session တစ်ခုအတွင်းမှာသုဉ်းသင်ယူမှုမှရလဒ်တုံ့ပြန်အတွက်ပုံမှန်လျှောက်လျော့နည်းအပေါ် superimposed ဖြစ်ပါတယ်။ တုံ့ပြန်၌ဤကနဦးကျဆင်းခြင်းမူရင်းအလင်း-အစားအစာအသင်းအဖွဲ့နှင့်အတူပေါင်းစပ်အတွက်အစားအစာ၏လက်ရှိတန်ဖိုးတစ်ခုပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုမှု၏အသုံးပြုမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရပေမည်။ ထို့ကြောင့်စစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်များကိုအပြုအမူလမ်းပြရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား manipulate အသုံးပြုနိုင်စွမ်း၏တိုက်ရိုက်တိုင်းတာသည်။
တစ်ဦးစစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် orbitofrontal cortex (OFC) ၏ neurotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဆိုးကျိုးများ။ (က) အဆိုပါ OFC ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန် neurotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူထိန်းချုပ်ရေးကြွက်များနှင့်ကြွက်များတစ်ဦးနှင့်အတူတစ်ဦးသောအခြေအနေများလှုံ့ဆော်မှု (CS, အလင်း) ပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် ...
OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက် [ရလဒ်ကို၏ပုံမှန်အေးစက်နှင့်တန်ဖိုးရှိနေသော်လည်း, ဒီပါရာဒိုင်းအတွက်တုံ့ပြန်သောအခြေအနေများအပေါ်တန်ဖိုးမဆိုသက်ရောက်မှုကိုပြသရန်ပျက်ကွက်23] ။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ (ကတင်ပြလျှင်သူတို့ကမပယ်မရှားပါလိမ့်မယ်သော်လည်း, ထိုအလင်း cue တုံ့ပြန်များနှင့်စားနပ်ရိက္ခာရရှိရန်ကြိုးပမ်းဆက်လက်ပုံ 2) ။ အရေးကြီးတာက, OFC-lesioned ကြွက် [သူတို့ရဲ့လိုငွေပြမှု conditional တုံ့ပြန်မှုတားစီးဖို့ယေဘုယျနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်ခြင်းမရှိပါကြောင်းဆန္ဒပြ, စမ်းသပ်မှု session တစ်ခုအတွင်းမှာသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုငြိမ်းအေးဖို့ပုံမှန်စွမ်းရည်ကိုပြသ24] ။ ယင်းအစားအဆိုပါ OFC မျှော်မှန်းရလဒ်များ၏တန်ဖိုးအသစ်၏ပြည်တွင်းရေးကိုယ်စားပြုသည်နှင့်အညီ conditional တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းချုပ်အတွက်တိကျသောအခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လေ့လာပြီးနောက်ဖန်ဆင်း OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဒီတာဝန်အတွက်အမူအကျင့်ကိုထိခိုက်ဆက်လက်  ။ အလားတူရလာဒ်များ [ဤတာဝန်တစ်ခုနျဆာပဗားရှင်းဖျော်ဖြေဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားမျောက်အစီရင်ခံခဲ့ကြ19].
OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်လည်းရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား၏အရှုံးနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြောင်းမြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများတွင် neurophysiological အပြောင်းအလဲများပြသပါ။ တဦးတည်းလေ့လာမှုမှာ  တုံ့ပြန်မှုအစောပိုင်းကဖော်ပြထားတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ဝတ္ထုအနံ့မခွဲခြားသင်ယူခြင်းနှင့်နောက်ပြန်ဆုတ်ကြွက်ထဲမှာ, basolateral amygdala, OFC ထံမှစီမံချက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့်ဧရိယာ၌တစ်ခုတည်းယူနစ်ကနေမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပုံမှန်အား basolateral amygdala အတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာရလဒ်ကို-မျှော်ပစ်ခတ်ရန်နှောင့်အယှက်။ ထို့အပွငျ OFC input ကိုပြင်, basolateral amygdala ၏အာရုံခံ cue-ရလဒ်ကိုအသင်းအဖွဲ့များပြောင်းပြန်ခဲ့ကြသည်အထူးသဖြင့်ပြီးနောက်ပိုပြီးတဖြည်းဖြည်း cue-ရွေးချယ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်ပယ်ဖျက်ခံရစဉ်အတွင်း OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ရလဒ်အဖြစ် basolateral amygdala အတွက်ပိုနှေးတယ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding က, ရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားသူတို့ပြောင်းပြန်၌ရှိကြ၏အဖြစ်မျှော်လင့်ချက်များအားချိုးဖောက်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လာသောအခါအခြားအဆောက်အဦများအတွက်လေ့လာသင်ယူလွယ်ကူချောမွေ့သောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ထို့ကြောင့် OFC အနာဂတျအကွောငျးမျှော်လင့်ချက်များအရသိရသည်အပြုအမူ၏လမ်းညွှန်မှုမှ, ဒါပေမယ့်လည်းသူများမျှော်လင့်ချက်၏ချိုးဖောက်မှုများထံမှလေ့လာသင်ယူနိုင်စွမ်းမှသာဝေဖန်ဖြစ်ကြောင်းရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထား generate နှင့်ကိုယ်စားပြုပုံပေါ်ပါတယ်။ ဒီ signal ကိုမရှိရင်တိရိစ္ဆာန်များ maladaptive အပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံ, antecedent တွေကိုနှင့်လှုံ့ဆော်မှု-တုံ့ပြန်မှုအလေ့အထများအသုံးပြုပုံထက်တစ်ရလဒ်ကိုသို့မဟုတ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုသိမြင်ကိုယ်စားပြုမှုခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်။
မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက် OFC function ကို၏ဤစိတ်ကူးမူးယစ်ဆေးစွဲတစ်ခုနားလည်မှုပူဇော်ဖို့အများကြီးရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ယင်းအလိုအရ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်  ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကိုတစ်ဦးချင်းဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်းသူသို့မဟုတ်သူမ၏မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူကိုထိန်းချုပ်ကာနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖော်ပြရန်လိုအပ်သည်။ ထိုသို့သောစွဲလမ်းအပြုအမူ compulsive, ထကြွလွယ်သော, perseverative အဖြစ်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေး-ဆက်စပ်တွေကိုထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အမျိုးမျိုးသွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျကမကြာခဏရပ်တန့်ဖို့စွဲများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်တစ်ဦးဖော်ပြထားသောဆန္ဒရှိနေသော်လည်းလေ့လာတွေ့ရှိထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကို OFC-lesioned ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသားကြောင်းအလားတူအပြုအမူတစ်ခုပုံစံလိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲ OFC ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကိုပြောင်းလဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စွဲ၏ပုံရိပ်လေ့လာမှုများ OFC ထဲမှာသွေးစီးဆင်းမှုအတွက်မူမမှန်တသမတ်တည်းထင်ရှားရှိသည်ဟု [28-33] (အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ ) ။ စူးရှသောဆုတ်ခွာစဉ်နှင့်ပင် abstinence ၏ရှည်လျားသောကာလပြီးနောက် OFC activation ၏အခြေခံတိုင်းတာအတွက်အရက်နှင့်ကင်းစွဲ display ကိုလျှော့ချ။ ပြောင်းပြန်မူးယစ်ဆေး-related တွေကိုထိတွေ့နေစဉ်အတွင်း, စွဲသူတို့တွေ့ကြုံခံစားသည်ဟုစွဲလမ်း၏ဒီဂရီနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်ကြောင်း OFC တစ်ခု overactivation ပြသပါ။ ဤအပြောင်းအလဲများ [မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် OFC-မှီခိုအပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်35-39] ။ အဆိုပါ OFC ၏တွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီလုပ်ပေးအဖြစ်ပျမ်းမျှအဖြစ်ပြင်းထန်မဟုတ်ပေမယ့်ဥပမာအားဖြင့်အရက်နှင့်ကင်းချိုးဖောက်မှုများ, အလားတူပြသခြင်း, လောင်းကစားလုပ်ငန်းတာဝန်အပေါ်ချို့ယွင်း, အစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူပင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ၏အခြားဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများစိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံးတော့ဘူး ယူ. ထိန်းချုပ်မှုထက်အကျိုးအရှိဆုံး option ကိုရွေးချယ်ဖို့လျော့နည်းဖွယ်ရှိဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါပြီ။ သို့သော်ဤလိုငွေပြမှုတချို့လူတွေအတွက်စွဲလမ်းတစ် Pre-ရှိပြီးသားအားနည်းချက်ထင်ဟပ်သလဲ? ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရေရှည်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် neuroadaptations ၏ရလဒ်ရှိပါသလဲ နှင့်အညီ, ဒါမယ်ဆိုရင်သူတို့ OFC အတွင်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် / သို့မဟုတ် function ကိုပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏သက်ရောက်မှုတူတဲ့ကြောင့်တခြားနေရာ corticolimbic ကွန်ရက်များအတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏ရလဒ်နေကြသနည်း
ဤမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်, ကစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်အတော်လေးသတ်မှတ်ထားတဲ့မျိုးဗီဇနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နောက်ခံဆန့်ကျင်နေတဲ့ထိန်းချုပ်ထားထုံးစံ၌အပျတျောမူနိုင်သည့်အတွက်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။ အထူးသဖြင့် psychostimulants - - အတော်လေးရှည်တည်တံ့ဦးနှောက်ထဲမှာရလဒ်များနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲများကို [ထိုကဲ့သို့သောလေ့လာမှုတစ်ခုကြီးထွားလာအရေအတွက်ကယခုစွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိတွေ့မှုသရုပ်ပြ40-50] ။ အရေးကြီးကဤသက်ရောက်မှုပုံမှန်အားလချုပ်ရာအပြီးနှင့်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအပြုအမူ၏ပုံမှန်ထိန်းချုပ်ရေးအတွက်အလွန်အရေးပါဖြစ်ကြောင်းဦးနှောက်ကိုဆားကစ်ပြုပြင်မွမ်းမံသောအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီမူးယစ်ဆေးထိတွေ့မသက်ဆိုင်သောဖြစ်ကြောင်းအပြုအမူအပြင်အဆင်များ, လေ့လာနေကြသည်။ မကြာသေးမီကအများအပြားလေ့လာမှုများ OFC အပေါ်သက်ရောက်မှုသရုပ်ပြပါပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, ရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာများအတွက် Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိတ်ကြွဆေးမှလေ့ကျင့်သင်ကြားကြွက် [တစ်လနောက်ပိုင်းတွင် OFC အတွက် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတစ်လျှော့ချရေးကိုပြသသတင်းပေးပို့ခဲ့ကြ46] ။ ထို့ပြင်ဤမူးယစ်ဆေး-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များဆာပလေ့ကျင့်ရေး appetitive တုံ့ပြန်မှာသူတို့ရဲ့ dendrites နည်းအသစ်ပြန်ပြုပြင်ပြ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်နျူကလိယ psychostimulants နှင့်အတူကုသမှုပြီးနောက်တခြားနေရာ accumbens နှင့်ယခင်က medial prefrontal cortex အစီရင်ခံထားပါတယ်သောတိုးမြှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆ၏အလငျး၌အထူးမှတ်သားဖွယ်များမှာ  ။ ထို့ကြောင့်ဤ corticolimbic ဒေသများအကြား, အ OFC မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက်လျော့နည်းသွား Synaptic plasticity အထောက်အထားဖေါ်ပြခြင်းအတွက်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အဆိုပါ OFC အတွက် plasticity တစ်ဦးကျဆင်းခြင်း OFC-မှီခိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအပေါ် impact ရန်မျှော်လင့်ခြင်းကိုခံရပေလိမ့်မည်။ ဒီကွေးမြားနှငျ့ကိုကျညီ, ကိုကင်းနှင့်အတူကုသမှုနှစ်ပါတ်သင်တန်းပေးထားသောကြွက် OFC-မှီခိုအပြုအမူအတွက်ကြာရှည်ချို့ယွင်းပြသပါ။ အထူးသညျဤတိရိစ္ဆာန်များကသူတို့အပြုအမူကိုလမ်းညွှန်ဖို့ခန့်မှန်းရလဒ်၏တန်ဖိုးသုံးစွဲဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ [တဦးတည်းစမ်းသပ်မှုများတွင်51] ကြွက်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ကိုကင်းများ၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးပေးထားခဲ့ကြသည်။ တဦးတည်းကျော်လအကြာမှာအဲဒီကြွက်တစ်ဦး Go ကို-NoGo အနံ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတာဝန်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ဒီတာဝန်များတွင်ကြွက်များတဦးတည်းအနံ့ကြိုင်ပြီးနောက် sucrose ရရှိရန်တစ်အရည်ဆိပ်ကမ်းသို့သွားနှင့်တစ်စက္ကန့်အနံ့ကြိုင်ပြီးနောက်ကွီနိုင်ရှောင်ရှားရန်တူညီအရည် port ကိုသွားနှိမ်ဖို့သင်ယူပါ။ ကိုကင်းနဲ့ကုသကြွက်ဆား-ကုသထိန်းချုပ်မှုပြုသကဲ့သို့တူညီမှုနှုန်းမှာထိုအမခွဲခြားလေ့လာသင်ယူ, ဒါပေမယ့်အဖြစ်လျှင်မြန်စွာထိန်းချုပ်မှုခဲ့ကြသည်အဖြစ်မခွဲခြား၏ပြောင်းပြန်ဆည်းပူးနိုင်ခြင်းရှိကြ၏။ အလားတူတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လိုငွေပြမှုမှာလည်း [ကင်းမှပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းနာတာရှည် access ကိုပေးသည်ဖြစ်ကြောင်းမျောက်ဝံများအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ကြ43] ။ ထိုသို့သောမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လိုငွေပြမှု [OFC-lesioned တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသား၏ဝိသေသများမှာ15-21] သူတို့လျှင်မြန်စွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအပြုအမူတွေကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကိုထင်ဟပ်ဖို့စဉ်းစားထားရာ။ ကျနော်တို့ [ဤလျင်မြန်စွာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထောက်ပံ့အတွက် OFC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားပြ၎င်း၏အရေးပါပုံကိုဆက်စပ်ကြောင်းအဆိုပြု26] ။ တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုစဉ်အတွင်းအမှန်တကယ်, ပြောင်းပြန်ရလဒ်ကိုနှင့်အတူဤအချက်ပြ၏နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသင်ယူအသစ်အဖို့အလွန်အရေးပါအမှားအချက်ပြမှုများကို generate မယ်လို့  ။ ဒီ signal ကိုမရှိရင် OFC-lesioned ကြွက်များထက်ပိုတဖြည်းဖြည်းသင်ယူလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားဆှေးနှေးခဲ့သကဲ့သို့, ဒီနှေးကွေးသင်ယူမှုတစ် neurophysiological Correlate မကြာသေးမီက [OFC-lesioned ကြွက်များတွင် basolateral amygdala အာရုံခံ၏တရားရှိဖို့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding ကအတွက်သရုပ်ပြခဲ့ပြီး26].
ဒီ signal ကို၏ဆုံးရှုံးမှု [ကြွက်နှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့ကိုကင်းနဲ့ကုသပြီးတော့အစောပိုင်းကဖော်ပြထားတဲ့ Pavlovian စစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်ရသောဒုတိယစမ်းသပ်မှုတွင်လည်းထင်ရှား၏24] ။ တနည်းကား, စမ်းသပ်ခြင်းပြီးခဲ့သည့်ကိုကင်းကုသမှုပြီးနောက်အကြောင်းကိုတစ်လကောက်ယူခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားကြွက်ပုံမှန်အေးစက်နှင့်တန်ဖိုးပြနှင့်လည်းနောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုအဆင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တုံ့ပြန်ငွိမျး; သို့သော် devalued ကင်း-ကုသကြွက်ဟာကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် cue တုံ့ပြန်အတွက်ပုံမှန်အလိုအလျောက်လျှော့ချရေးမပြခဲ့ပေ။ ဤသည်လိုငွေပြမှု (ပုံ 3) (ဒီတာဝန်အတွက် OFC ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ပြီးနောက်လိုငွေပြမှုမှတူညီဖြစ်ပါသည်ပုံ 2) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်မျှော်မှန်းရလဒ်၏တန်ဖိုးအချက်တစ်ခုနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ ဒီတာဝန်အတွက်ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်ကိုယ်စားပြုနှင့် ပတ်သက်. မပါမရေရာဒွိဟစရာရှိသောကြောင့်အမှန်စင်စစ်, ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့လိုငွေပြမှုကိုကင်း-ကုသကြွက်များတွင်ရလဒ်မျှော်လင့်ထား၏ဆုံးရှုံးမှုဆီသို့ဦးတည်ပြတ်ပြတ်သားသားထောက်ပြတာပါ။
ယင်းစစ်ကူတန်ဖိုးတာဝန်အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ကိုကင်းကုသမှုသက်ရောက်မှု (ပုံ 2) ။ Saline- နှင့်ကိုကင်း-ကုသကြွက်တစ်ဦးခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (အမေရိကန်, အစားအစာ) နှင့်အတူတစ်ဦးသောအခြေအနေများလှုံ့ဆော်မှု (CS, အလင်း) ပေါင်းသင်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ (က) လေးကျော် session တစ်ခုလုပ်ကွက်, ...
ဒီအချက်ပြယန္တရား၏အရှုံးကြောင့်သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသို့ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်သတင်းအချက်အလက်ထည့်သွင်းနိုင်ခြင်းနှင့်ထံမှသင်ယူဖို့ဖြစ်ကောင်းနိုင်ခြင်းဆပ်လို့, ထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများ၏နီးပါးမလွှဲမရှောင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များရှိနေသော်လည်း, မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဆက်လက်စွဲ၏ propensity များအတွက်အကောင့်မယ်လို့ ပင်ဤအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏အတွေ့အကြုံကိုထပ်ခါတလဲလဲ။ သည်အခြားဦးနှောက်စနစ်များလည်းပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါပေမယ့်, ဒီ OFC-မှီခို signal ကိုမှမူးယစ်သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုတုံ့ပြန်လေ့ compulsive မှသာမန်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူကနေအကူးအပြောင်းမှအားကောင်းအထောက်အကူပြုသူတို့ကိုယ်သူတို့ by လိမ့်မယ်။ ဒီအကူးအပြောင်းအမူအကျင့်ထိန်းချုပ်မှုဤယှဉ်ပြိုင်ယန္တရားများအကြားချိန်ခွင်လျှာအတွက်အပြောင်းအလဲတစ်ခုထင်ဟပ်လိမ့်မယ်။ ထိုသို့သောတစ်ဦးရှင်းပြချက် [ဆိုးရွားသောရလဒ်များကြောင့်အပြုအမူအပေါ်သို့ကဆက်ပြောပါတယ်ထားကြပါတယ်ပင်အခါ, စွဲ၏မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူအဘို့နှင့်လည်းကြွက်များမူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူနှိမ်နိုင်ရင်သောစွဲလမ်းအများအပြားတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်များအဘို့အကိုင်မယ်လို့45,47].
ကျနော်တို့ OFC မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များသို့မဟုတ်အကျိုးဆက်များ၏တန်ဖိုးကိုပြဘို့အလွန်အရေးပါကြောင်းအဆိုပြုချက်ကိုကိုထောကျပံ့ဖို့မကြာသေးမီတွေ့ရှိချက်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါပြီ။ ငါတို့သည်လည်းဒီစိတ်ကူးမူးယစ်ဆေးစွဲအခြေခံသောရောဂါဗေဒကိုနားလည်ဘို့အရေးကြီးသောဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။ ၏သင်တန်းသည်ဤအတွေးအခေါ်များကိုအများကြီးပိုပြီးမေးခွန်းတွေတင်ပြထားတယ်။ သာမန်တိရစ္ဆာန်များအတွက်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ထိတွေ့သူတွေကိုအပြင် - ထို OFC မျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များနှင့် ပတ်သက်. အချက်ပြထုတ်ပေးပါကဤအအချက်ပြမှုများကိုအသုံးပြုဖို့ဘယ်လိုမြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများနားလည်ရန်အလွန်အရေးပါဖြစ်လာသည်။ ကျနော်တို့ [သည့် basolateral amygdala ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုအကြံပြုခဲ့ကြ26]; သို့သော်ဤအချက်ပြသည့်နျူကလိယရှိအခန်းကဏ္ဍကိုနားလည်သဘောပေါက် accumbens - နှင့်မည်သို့သူတို့သည်အခြား '' limbic '' သွင်းအားစုနှင့်အတူအပြန်အလှန် - စွဲကိုနားလည်ဘို့ ပို. သက်ဆိုင်ရာဖြစ်လိမ့်မယ်။ အများအပြားကဓါတ်ခွဲခန်းကဤအရေးကြီးသောကိစ္စများဖြေရှင်းရန်ခက်ခဲအလုပ်လုပ်နေကြသည်။ ထို့အပြင်ကြောင့်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက် OFC-မှီခိုအပြုအမူအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအမှန်တကယ် [ပဏာမမှတ်တမ်းတင်ဒေတာများကအကြံပြုသည်အတိုင်း, OFC အတွက်ပြောင်းလဲမော်လီကျူးသို့မဟုတ် neurophysiological function ကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိကိုသရုပ်ပြရန်အရေးကြီးပါသည်ဖွစျလိမျ့မညျ52], ဒါမှမဟုတ်တနည်းသူတို့က, တာရှည်စွဲများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဧရိယာဖြစ်သောနျူကလိယ accumbens ၌ရှိသကဲ့သို့တိုက်နယ်အတွင်းရှိအခြားနေရာများတွင်အပြောင်းအလဲကိုထင်ဟပ်စေခြင်းငှါ, ရှိမရှိ။ ကရောဂါဗေဒအပြောင်းအလဲများကိုများအတွက်ကိုးကွယ်ရာအကြံပြုလိုလျှင်, သင်တန်း၏, ရောဂါမဆိုတိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်သာတန်ဖိုးရှိသည်။ ဤသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ခက်ခဲသော်လည်းမူးယစ်ဆေးဝါးထိတွေ့မှုကနေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလိုငွေပြမှုဘို့ဖြစ်နိုင်သမျှဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ထိန်းသိမ်းရေးအပြုအမူနှင့်ဖြစ်ကောင်းမူးယစ်ဆေး-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ဖော်ထုတ်ကြသည်ဆိုမော်လီကျူးသို့မဟုတ် neurophysiological ဆက်စပ်မှုပုံမှန်ဖို့ဆောင်ရွက်စေခြင်းငှါရှိမရှိထင်ရှားစေခြင်းငှါနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ (ဤအများအပြားပိုပြီးကိစ္စရပ်များကိုလာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားထောင့်ကွက် 3).
ထောင့်ကွက်3။ အဖြေမရတဲ့မေးခွန်းတွေ
ဘယ်လိုလုပ်ကြဘူးမြစ်အောက်ပိုင်းဒေသများ - အထူးသဖြင့်နျူကလိယ accumbens - အသုံးပြုမှုကိုအချက်ပြသည့် OFC ထံမှရလဒ်ကိုမျှော်လင့်ထားနှင့် ပတ်သက်. ? ဘယ်လိုဤအချက်အလက်အဆိုပါ accumbens အခြား '' limbic '' သွင်းအားစုနှင့်အတူပေါင်းစည်းသလဲ?
မူးယစ်ဆေးထိတွေ့ပြီးနောက် OFC-မှီခိုအပြုအမူတွေအတွက်ပြောင်းလဲမှု OFC အတွင်းမော်လီကျူးသို့မဟုတ် neurophysiological ပစ်မှတ်ပြောင်းလဲမှုများချိတ်ဆက်နိုင်သလော သို့မဟုတ်ဤအပြုအမူလိုငွေပြမှုတခြားနေရာသင်ယူမှုဆားကစ်ပြောင်းလဲမှုများထင်ဟပ်သလဲ?
အပြုအမူများသို့မဟုတ်အခြားအမှတ်အသားများအတွက်မူးယစ်ဆေး-related အပြောင်းအလဲများကိုအပြုအမူသို့မဟုတ် pharmacological ထိန်းသိမ်းရေးအားဖြင့်ပြောင်းပြန်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
အဆိုပါ OFC အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်ဆက်စပ်သင်ယူမှုဆားကစ် Non-ဆက်ပြောပါတယ်မူးယစ်ဆေးအတွေ့အကြုံတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ဆက်ပြောပါတယ်ပေးထားတိရိစ္ဆာန်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားပါသလား? ဒီတော့လျှင်, ကွဲပြားခြားနားမှုအပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးဝေဖန်သက်ရောက်မှုရှိသနည်း
အဆိုပါ OFC ပြောင်းလဲမှုများ compulsive မူးယစ်ဆေးရှာခြင်းနှင့် relapse ၏မူးယစ်ဆေးစွဲမော်ဒယ်များအတွက်အပြုအမူအခြေခံပါသလား ထိုသူတို့ကပိုပြီးရေရှည်သုံးစွဲနိုင်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသော striatal အပြောင်းအလဲများ, သြဇာဖြစ်လာမတိုင်မီဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမြှင့်တင်ရန်, အစောပိုင်းစွဲဖို့အကူးအပြောင်းအတွက်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသောဖြစ်စျနိုငျသလဲ
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသန (GS မှ R01-DA015718) ကို NIDA ထံမှထောက်ပံ့ငွေကထောက်ခံခဲ့သည်, (MRR မှ T32-NS07375) NINDS နှင့် NIDCD (TAS မှ T32-DC00054) ။
1 ။ တိရိစ္ဆာန်အေးစက်အတွက် Dickinson အေကိုမျှော်လင့်သီအိုရီ။ ခုနှစ်တွင်: Klein SB, Mowrer RR, အယ်ဒီတာများ။ ခေတ်ပြိုင်သင်ယူသီအိုရီ: Pavlovian အခြေအနေများနှင့်ရိုးရာသင်ယူသီအိုရီ၏အခြေအနေ။ Erlbaum; 1989 ။ စစ။ 279-308 ။
2 ။ Goldman-Rakic ​​ဆာ။ ကိုယ်စားပြုမှတ်ဉာဏ်အားဖြင့်မျောက် prefrontal cortex နှင့်အပြုအမူ၏စည်းမျဉ်းများ Circuitry ။ et al Mountcastle vB, အယ်ဒီတာများ in: ။ ။ ဇီဝကမ္မဗေဒ၏လက်စွဲစာအုပ်: အဆိုပါအာရုံကြောစနစ်။ V. အမေရိကန်ဇီဝကမ္မဗေဒ Society က; 1987 ။ စစ။ 373-417 ။
3 ။ et al Gottfried ဂျာ။ လူ့ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးကို Encoding ။ သိပ္ပံ။ 2003; 301: 1104-1107 ။ [PubMed]
4 ။ et al Gottfried ဂျာ။ လူသားတွေအတွက်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိ olfactory သင်ယူမှုဖြစ်ရပ်-related အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်သုံးပြီးလေ့လာခဲ့သည်။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 10829-10837 ။ [PubMed]
5 ။ et al O'Doherty J ကို။ အဓိကအရသာဆုလာဘ်များမျှော်လင့်နေစဉ်အတွင်းအာရုံကြောတုံ့ပြန်မှု။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2002; 33: 815-826 ။ [PubMed]
6 ။ Nobre AC အ, et al ။ Orbitofrontal cortex အမြင်အာရုံအာရုံစိုက်မှု၏တာဝန်များကိုအတွက်မျှော်လင့်ခြင်းပြိုပျက်ရာတို့ကိုစဉ်အတွင်း activated ဖြစ်ပါတယ်။ နတ် neuroscience ။ 1999; 2: 11-12 ။ [PubMed]
7 ။ et al Arana FS ။ မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ရည်မှန်းချက်ရွေးချယ်ရေးမှလူ့ amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏ Dissociable ပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 9632-9638 ။ [PubMed]
8 ။ et al Schoenbaum, G, ။ cue နမူနာစဉ်အတွင်း orbitofrontal cortex အတွက်ခန့်မှန်းရလဒ်နှင့်ဝယ်ယူတန်ဖိုးကို Encoding basolateral amygdala ကနေ input ကိုအပေါ်သို့မူတည်ပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2003; 39: 855-867 ။ [PubMed]
9 ။ et al Schoenbaum, G, ။ Orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အန်ကုက်လုပ်ပါလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းရလဒ်များမျှော်မှန်းထားသည်။ နတ် neuroscience ။ 1998; 1: 155-159 ။ [PubMed]
10 ။ Tremblay L ကို, မျောက် orbitofrontal cortex အတွက် Schultz ဒဗလျူဆွေမျိုးဆုလာဘ် preference ကို။ သဘာဝ။ 1999; 398: 704-708 ။ [PubMed]
11 ။ Roesch MR, Olson CR ။ မျောက်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်တန်ဖိုးနှင့်လှုံ့ဆျောမှုဆုချနှင့်ဆက်စပ်သောအာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ သိပ္ပံ။ 2004; 304: 307-310 ။ [PubMed]
12 ။ Roesch MR, Olson CR ။ မျောက် orbitofrontal cortex အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုအချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုထင်ဟပ်။ J ကို Neurophysiol ။ 2005; 94: 2457-2471 ။ [PubMed]
13 ။ et al Schoenbaum, G, ။ တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်-ချို့ယွင်းအသက်ကြွက်များတွင် orbitofrontal cortex ပြောင်းလဲမှုများ Encoding ။ J ကို Neurophysiol ။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
14 ။ Bechara တစ်ဦးက, et al ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လူ့ amygdala နှင့် ventromedial prefrontal cortex ၏ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 5473-5481 ။ [PubMed]
15 ။ et al Schoenbaum, G, ။ orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala ရှုပ်ထွေးသော၏တွေ့ရှိရပါသည်အနံ့-guided မခွဲခြားနှင့်ပြောင်းပြန်၏ဝယ်ယူနှောင့်အယှက်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2003; 10: 129-140 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
16 ။ et al Rolls ET ။ တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဆက်စပ်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများနှင့်လူနာအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု-related သင်ယူမှု။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1994; 57: 1518-1524 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17 ။ ဂျုံးစ် B, Mishkin အမ် Limbic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်လှုံ့ဆော်မှု-အားဖြည့်အသင်းအဖွဲ့များ၏ပြဿနာ။ Exp Neurol ။ 1972; 36: 362-377 ။ [PubMed]
18 ။ Chudasama Y ကို, Robbins TW ။ အဆိုပါကြွက်တိုကျရိုကျ cortex ၏အလုပ်လုပ်တဲ့သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောများအတွက်နောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထား: pavlovian autoshaping နှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်သင်ယူမှုဖို့ orbitofrontal နှင့် infralimbic cortex ၏ Dissociable ပံ့ပိုးမှုများကို။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 8771-8780 ။ [PubMed]
19 ။ Izquierdo တစ်ဦးက, et al ။ မျောက်တွေကိုအတွက်နှစ်နိုင်ငံ Orbital prefrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ဆုလာဘ်တန်ဖိုးနှင့်ဆုလာဘ်အရေးပေါ်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်ပဲ့ထိန်းရွေးချယ်မှုနှောင့်အယှက်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 7540-7548 ။ [PubMed]
20 ။ LK, Farah MJ Fellows ။ Ventromedial တိုကျရိုကျ cortex လူသားတွေအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေရွေ့ပြောင်း mediates: ပါရာဒိုင်းသင်ယူခြင်းတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ထံမှသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက်။ 2003; 126: 1830-1837 ။ [PubMed]
21 ။ Dias R ကို, et al ။ ထိခိုက်စေခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆိုင်း၏ prefrontal cortex အတွက် Dissociation ။ သဘာဝ။ 1996; 380: 69-72 ။ [PubMed]
22 ။ et al Camille N ကို။ နောင်တ၏အတွေ့အကြုံအတွက် orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ သိပ္ပံ။ 2004; 304: 1167-1170 ။ [PubMed]
23 ။ et al Gallagher M က။ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအတွက်မက်လုံးပေးတန်ဖိုး Orbitofrontal cortex နဲ့ကိုယ်စားပြုမှု။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 6610-6614 ။ [PubMed]
24 ။ Schoenbaum, G, Setlow ခကင်းသုဉ်းလုပ်ရပ်များရလဒ်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သောသော်လည်းမစေသည်: ပြောင်းလဲ orbitofrontal-amygdalar function ကိုအဘို့အဂယက်ရိုက်။ Cereb Cortex ။ 2005; 15: 1162-1169 ။ [PubMed]
25 ။ et al Pickens CL ။ orbitofrontal cortex နှင့်စစ်ကူတန်ဖိုး task ထဲမှာ basolateral amygdala များအတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 11078-11084 ။ [PubMed]
26 ။ Saddoris အမတ်, et al ။ basolateral amygdala အတွက်လျင်မြန်စွာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ encoding က orbitofrontal cortex နှင့်အတူဆက်သွယ်မှုပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 321-331 ။ [PubMed]
27 ။ American Psychiatric Association ။ diagnostic နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Disorders ၏စာရင်းအင်းလက်စွဲ (စာသားတည်းဖြတ်မူ)4။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအစည်းအရုံး; 2000 ။
28 ။ လန်ဒန် ED, et al ။ Orbitofrontal cortex နှင့်လူ့မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု: အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံရိပ်။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 334-342 ။ [PubMed]
29 ။ et al ရော်ဂျာ RD ။ နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ, opiate ချိုးဖောက်မှုများ, prefrontal cortex မှ focal ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူလူနာနဲ့ tryptophan-ကုန်ခမ်းပုံမှန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သိမှတ်ခံစားမှုထဲမှာ Dissociable လိုငွေပြမှု: monoaminergic ယန္တရားများအဘို့သက်သေသာဓက။ Neuropsychopharmacology ။ 1999; 20: 322-339 ။ [PubMed]
30 ။ et al Maas LC ။ cue-သွေးဆောင်ကင်းတဏှာစဉ်အတွင်းလူ့ဦးနှောက်ကို Activation ၏ functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1998; 155: 124-126 ။ [PubMed]
31 ။ et al Breiter HC ။ လူ့ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကိုကင်း၏ acute ဆိုးကျိုးများ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1997; 19: 591-611 ။ [PubMed]
32 ။ Porrino LJ, လီယွန်ဃ Orbital နှင့် prefrontal cortex နဲ့ psychostimulant အလွဲသုံးစားမှု medial: တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လေ့လာမှုများ။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 326-333 ။ [PubMed]
33 ။ Volkow ND, မုဆိုး JS ။ စွဲလမ်း, မလှူခြင်းနှင့် drive ကိုတစ်ဦးရောဂါ: orbitofrontal cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 318-325 ။ [PubMed]
34 ။ et al Dom, G, ။ ပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းမမှန်ခြင်းနှင့် orbitofrontal cortex ။ br J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2005; 187: 209-220 ။ [PubMed]
35 ။ Bechara တစ်ဦးက, et al ။ အလုပ်မဖြစ်တဲ့ ventromedial prefrontal cortex ဆက်စပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုငွေပြမှု, အရက်နှင့်လှုံ့ဆော်ချိုးဖောက်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ Neuropsychologia ။ 2001; 39: 376-389 ။ [PubMed]
36 ။ et al Coffey SF ။ Impulse နှင့်ကိုကင်း-မှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက်နှောင့်နှေးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ဆုလာဘ်၏လျင်မြန်လျှော့စျေး။ Exp Clin Psychopharmacol ။ 2003; 11: 18-25 ။ [PubMed]
37 ။ Bechara တစ်ဦးက, Damasio အိပ်ချ်ဆုံးဖြတ်ချက်-ချမှတ်ခြင်းနှင့်စွဲ (အပိုင်းငါ): ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုတစ်ဦးချင်းစီအတွက် somatic ပြည်နယ်များ၏ချို့ယွင်း activation အနုတ်လက္ခဏာအနာဂတ်အကျိုးဆက်များနှင့်အတူဆုံးဖြတ်ချက်များစဉ်းစားသုံးသပ်ရသောအခါ။ Neuropsychologia ။ 2002; 40: 1675-1689 ။ [PubMed]
38 ။ Bechara တစ်ဦးက, et al ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့်စွဲ (အပိုင်း II ကို): ဆုချဖို့အနာဂတျအတှကျ myopia သို့မဟုတ် hypersensitivity? Neuropsychologia ။ 2002; 40: 1690-1705 ။ [PubMed]
39 ။ S ကပေးသနား, et al ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများတွင်ချို့ယွင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသပါ။ Neuropsychologia ။ 2000; 38: 1180-1187 ။ [PubMed]
40 ။ Harmer CJ, Phillips က GD ။ D-စိတ်ကြွဆေးနှင့်အတူအထပ်ထပ် pretreatment အောက်ပါ Enhanced စာစားချင်စိတ်ကိုအေးစက်။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 1998; 9: 299-308 ။ [PubMed]
41 ။ စိတ်ကြွဆေးသို့မဟုတ်ကင်းနှင့်အတူအထပ်ထပ်ကုသမှုအပြီးတွင်နျူကလိယ accumbens နှင့် prefrontal cortex အတွက် dendrites နှင့် dendritic ကျောရိုး၏ shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်အတွက်ရော်ဘင်ဆင် TE, Kolb ခ ALTER ။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 1598-1604 ။ [PubMed]
42 ။ Wyvell CL, Berridge KC ။ ယခင်စိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုအားဖြင့်မက်လုံးပေးာင်း: တိုးမြှင့် cue-ဖြစ်ပေါ် sucrose အကျိုးသည် '' လို '' ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 7831-7840 ။ [PubMed]
43 ။ et al Jentsch JD ။ မျောက်မှထပ်ခါတလဲလဲ, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုကင်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်လေ့လာသင်ယူမှုနှင့်တုန့်ပြန်ဇွဲ၏ချို့ယွင်း။ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 26: 183-190 ။ [PubMed]
44 ။ တေလာ JR, Horger BA ဘွဲ့။ Enhanced အချင်းချင်းအပြန်အလှန် accumbens စိတ်ကြွဆေးထုတ်လုပ် conditional အကျိုးသည်တုံ့ပြန်ကင်းာင်းပြီးနောက် potentiated ဖြစ်ပါတယ်။ Psychopharmacology (Berl) 1999; 142: 31-40 ။ [PubMed]
45 ။ Vanderschuren LJMJ, Everitt BJ ။ မူးယစ်ဆေးရှာအချိန်ကြာမြင့်စွာကင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောဖြစ်လာသည်။ သိပ္ပံ။ 2004; 305: 1017-1019 ။ [PubMed]
46 ။ et al Crombag HS ။ အဆိုပါ medial နှင့် Orbital prefrontal cortex အတွက် dendritic ကျောရိုးအပေါ်စိတ်ကြွဆေး Self-အုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဆိုးကျိုးများ။ Cereb Cortex ။ 2004; 15: 341-348 ။ [PubMed]
47 ။ et al မိုင် FJ ။ ကြွက်များကရှာကြံခံတွင်းကိုကင်း: အရေးယူမှုသို့မဟုတ်အလေ့အထ? ပြုမူနေ neuroscience ။ 2003; 117: 927-938 ။ [PubMed]
48 ။ Horger BA, et al ။ Preexposure ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှကြွက်များ sensitizes ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 1990; 37: 707-711 ။ [PubMed]
49 ။ et al Phillips က GD ။ Post-session ကိုအချင်းချင်းအပြန်အလှန် amygdaloid nafadotride ခြင်းဖြင့်အစာစားချင်စိတ်အေးစက်၏အရေးသွေးဆောင်ပံ့ပိုးကူညီ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 134: 249-257 ။ [PubMed]
50 ။ တေလာ JR, Jentsch JD ။ psychomotor လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးထပ်ခါတစ်လဲလဲပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် Pavlovian ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများဝယ်ယူပွောငျးလဲ: ကိုကင်း, D-စိတ်ကြွဆေးနှင့် 3,4-methylenedioxymethamphetamine ၏ differential ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ ( 'ecstasy') Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001; 50: 137-143 ။ [PubMed]
51 ။ et al Schoenbaum, G, ။ ကိုကင်း-အတွေ့အကြုံရှိကြွက်များ orbitofrontal cortex ကိုတွေ့ရှိရပါသည်မှအထိခိုက်မခံတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်လိုငွေပြမှုသင်ယူခြင်းပြ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2004; 19: 1997-2002 ။ [PubMed]
52 ။ et al Stalnaker က TA ။ စိတ္တဇ Viewer ကိုများနှင့်ခရီးစဉ်အစီအစဉျ။ အာရုံကြောသိပ္ပံအဘို့လူ့အဖွဲ့အစည်း; 2005 ။ Orbitofrontal cortex ကင်းထိတွေ့ပြီးနောက်ဆိုးရွားသည့်ရလဒ်များကိုကိုယ်စားပြုပျက်ကွက်။ Program ကိုအရေအတွက်အား 112.2 ။ အွန်လိုင်း ( http://sfn.scholarone.com/)
53 ။ je, Woolsey CN မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex နဲ့ယုန်, သိုး, ကြောင်အတွက် mediodorsal နျူကလိယနှင့်အတူ၎င်း၏ဆက်သွယ်မှု။ res မြည်းကိုအာရုံကြော Ment dis အရက်ဆိုင်။ 1948; 27: 210-232 ။ [PubMed]
54 ။ ကြွက် 1 ၏ဒေသဆိုင်ရာ cortex ၏ဒဏ်ငွေဖွဲ့စည်းပုံမှာအပေါ် Ramon y က Cajal အက်စ်လေ့လာရေး: suboccipital cortex (Brodmann ၏ retrosplenial cortex) ခုနှစ်တွင်: Defelipe J ကို, ဂျုံးစ်ဥပမာအယ်ဒီတာများ။ အဆိုပါနှောက် Cortex အပေါ် Cajal: အပြီးအစီးကျမ်းစာလာသည်တစ်ခု Annotation ဘာသာပြန်စာပေ။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 1988 ။ စစ။ 524-546 ။ Trabajos del Laboratorio က de Investigaciones Biologicas de la Universidad de မက်ဒရစ်, 20: 1-30, 1922 ။
55 ။ Groenewegen HJ ။ အဆိုပါ mediodorsal-prefrontal မြေမျက်နှာသွင်ပြင်နှင့် ပတ်သက်. ကြွက်များတွင် mediodorsal thalamic နျူကလိယ၏ afferent ဆက်သွယ်မှု၏အဖွဲ့။ neuroscience ။ 1988; 24: 379-431 ။ [PubMed]
56 ။ Krettek je, စျေး JL ။ အဆိုပါ mediodorsal နျူကလိယနှင့်ကြွက်များတွင်ကပ်လျက် thalamic အရေးပါ၏ cortical စီမံကိန်းများ။ J ကို comp Neurol ။ 1977; 171: 157-192 ။ [PubMed]
57 ။ Leonard CM ။ ကြွက်များ၏ prefrontal cortex ။ အဆိုပါ mediodorsal နျူကလိယ၏ဗြဲ cortical စီမံကိန်းများ။ II ကို။ Efferent ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1969; 12: 321-343 ။ [PubMed]
58 ။ ကြွက်၏တိုကျရိုကျ cortex ၏ Kolb ခ Functions များ: တစ်နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1984; 8: 65-98 ။ [PubMed]
59 ။ ray JP, စျေး JL ။ prefrontal cortex မြေမျက်နှာသွင်ပြင် - ထို ventral forebrain နှင့်ဆက်စပ်သောကြွက်များတွင် mediodorsal thalamic နျူကလိယ၏ thalamocortical ဆက်သွယ်မှု၏အဖှဲ့အစညျး။ J ကို comp Neurol ။ 1992; 323: 167-197 ။ [PubMed]
60 ။ Goldman-Rakic ​​PS, Porrino LJ ။ အဆိုပါမျောက် mediodorsal (MD) နျူကလိယနှင့်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးရန်၎င်း၏အနာဂတ်။ J ကို comp Neurol ။ 1985; 242: 535-560 ။ [PubMed]
61 ။ Russchen FT, et al ။ မျောက်အတွက် mediodorsal thalamic နျူကလိယ၏ magnocellular ဌာနခွဲမှအဆိုပါ afferent input ကို, Macaca fascicularis ။ J ကို comp Neurol ။ 1987; 256: 175-210 ။ [PubMed]
62 ။ Kievit J ကို, Kuypers HGJM ။ အဆိုပါမျောက်တွေကိုအတွက်တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးဖို့ thalamocortical ဆက်သွယ်မှု၏အဖွဲ့။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1977; 29: 299-322 ။ [PubMed]
63 ။ Preuss TM အလိုအလျောက်။ ကြွက် prefrontal cortex ရှိပါသလား? အဆိုပါနှင်းဆီ-Woolsey-Akert အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စဉ်းစား။ J ကို comp Neurol ။ 1995; 7: 1-24 ။ [PubMed]
64 ။ Ongur: D, စျေး JL ။ ကြွက်, မျောက်နှင့်လူသား၏ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် medial prefrontal cortex အတွင်းကွန်ရက်အဖွဲ့အစည်း။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 206-219 ။ [PubMed]
65 ။ Schoenbaum, G, prefrontal သီအိုရီသို့ orbitofrontal cortex ပေါင်းစပ်ခြင်း Setlow ခ: မျိုးစိတ်နှင့် subdivision ဖြတ်ပြီးဘုံအပြောင်းအလဲနဲ့ themes များ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2001; 8: 134-147 ။ [PubMed]
66 ။ Baxter MG, Murray EA ၏။ အဆိုပါ amygdala နှင့်ဆုလာဘ်။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 563-573 ။ [PubMed]
67 ။ Kluver H ကို, Bucy PC ကို။ မျောက်များအတွက်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏ပဏာမဆန်းစစ်။ Arch Neurol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1939; 42: 979-1000 ။
68 ။ ဘရောင်းက S, Schafer EA ၏။ မျောက်ရဲ့ဦးနှောက်၏ occipital နှင့်ယာယီပေါ်၌ရှိသောအမြှေး၏လုပ်ငန်းဆောင်တာသို့တစ်ဦးစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ဖီလိုဖြတ်ကျော် R ကို Soc လန်ဒန် SER ခ 1888; 179: 303-327 ။
69 ။ LeDoux je ။ အဆိုပါ Emotional Brain ။ ရှိမုန်နှင့် Schuster; 1996 ။
70 ။ မျောက်များအတွက် amygdaloid ရှုပ်ထွေးသော၏ ablations နှင့်ဆက်စပ် Weiskrantz အယ်လ်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများကို။ J ကို comp Physiol Psychol ။ 1956; 9: 381-391 ။ [PubMed]
71 ။ ဟော်လန်ကို PC, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ကိုယ်စားပြုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် Gallagher အမ် Amygdala circuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 1999; 3: 65-73 ။ [PubMed]
72 ။ Gallagher အမ်အဆိုပါ amygdala နှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူမှု။ ခုနှစ်တွင်: Aggleton JP, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Amygdala: တစ်ဦးက Functional အားသုံးသပ်ခြင်း။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2000 ။ စစ။ 311-330 ။
73 ။ Davis ကအမ်အခြေအနေများနှင့်ခြွင်းချက်မရှိကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်စိတ်အတွက် amygdala ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခုနှစ်တွင်: Aggleton JP, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Amygdala: တစ်ဦးက Functional အားသုံးသပ်ခြင်း။ အောက်စ်ဖို့တက္ကသိုလ်ကစာနယ်ဇင်း; 2000 ။ စစ။ 213-287 ။
74 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ Amygdala-ventral striatal interaction ကနှင့်ဆုလာဘ်-related ဖြစ်စဉ်များ။ ခုနှစ်တွင်: Aggleton JP, အယ်ဒီတာ။ အဆိုပါ Amygdala: အာရုံကြော Emotion ၏ရှုထောင့်, မှတ်ဉာဏ်နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်။ ယောဟနျသ Wiley နှင့်သား, 1992 ။ စစ။ 401-429 ။
75 ။ Fuster JM ။ အဆိုပါ Prefrontal Cortex ။ Lippin-Ravencott; 1997 ။
76 ။ Gaffan: D, Murray EA ၏။ အဆိုပါ thalamus ၏ mediodorsal နျူကလိယနှင့်မျောက်အတွက်သင်ယူမှုလှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အတွက် ventromedial prefrontal cortex နှင့်အတူ Amygdalar အပြန်အလှန်။ J ကို neuroscience ။ 1990; 10: 3479-3493 ။ [PubMed]
77 ။ et al Baxter MG ။ စစ်ကူတန်ဖိုးကိုခြင်းဖြင့်တုန့်ပြန်ရွေးချယ်ရေး၏ထိန်းချုပ်ရေး amygdala နှင့် orbitofrontal cortex ၏အပြန်အလှန်လိုအပ်သည်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 4311-4319 ။ [PubMed]
78 ။ Krettek je, စျေး JL ။ ကြွက်နှင့်ကြောင်တစ်ကောင်အတွက်နှောက် cortex နဲ့ thalamus ဖို့ amygdaloid ရှုပ်ထွေးထံမှ projections ။ J ကို comp Neurol ။ 1977; 172: 687-722 ။ [PubMed]
79 ။ Kita H ကို, Kitai ST ။ အဆိုပါတိုကျရိုကျ cortex နှင့်ကြွက်များတွင် striatum မှ Amygdaloid စီမံကိန်းများ။ J ကို comp Neurol ။ 1990; 298: 40-49 ။ [PubMed]
80 ။ ရှီ CJ, Cassell MD ။ cortical, thalamic, နှင့် anterior နှင့် posterior နောက်ကျနေခဲ့သည် cortical ၏ amygdaloid ဆက်သွယ်မှု။ J ကို comp Neurol ။ 1998; 399: 440-468 ။ [PubMed]
81 ။ et al Groenewegen HJ ။ တစ်ဦးအပြိုင်အဖွဲ့အစည်းအတွက်သက်သေအထောက်အထား: အ striatopallidal စနစ်, thalamus နှင့် amygdala အတူ prefrontal cortex ၏ခန္ဓာဗေဒကြားဆက်ဆံရေး။ prog ဦးနှောက် Res ။ 1990; 85: 95-118 ။ [PubMed]
82 ။ et al Groenewegen HJ ။ ကြွက်များတွင် ventral striatum ဖို့ subiculum ထံမှစီမံကိန်းအဖွဲ့။ ၏ anterograde သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးလေ့လာမှုတစ်ခု Phaseolus vulgaris leucoagglutinin ။ neuroscience ။ 1987; 23: 103-120 ။ [PubMed]
83 ။ et al Haber SN ။ အဆိုပါမျောက် Basal ganglia မှတဆင့်ဂြိုဟ်တုပတ်လမ်းနှင့် medial prefrontal circuit ကို။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 4851-4867 ။ [PubMed]
84 ။ မက်ဒေါ်နယ် AJ ။ ကြွက်များတွင် prefrontal cortex နဲ့ဆက်စပ် striatum ဖို့ amygdaloid စီမံကိန်း၏အဖွဲ့။ neuroscience ။ 1991; 44: 1-14 ။ [PubMed]
85 ။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် coding O'Donnell P. Ensemble ။ Psychobiology ။ 1999; 27: 187-197 ။
86 ။ Thorpe SJ, et al ။ အဆိုပါ orbitofrontal cortex: အပြုမူမျောက်အတွက်အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု။ Exp ဦးနှောက် Res ။ 1983; 49: 93-115 ။ [PubMed]
87 ။ Schoenbaum, G, Eichenbaum အိပ်ချ်အချက်အလက်များကိုကြွက် prefrontal cortex အတွက် coding ။ pyriform cortex အတွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ orbitofrontal cortex အတွက်ဗြဲ Single-အာရုံခံဆဲလျလှုပ်ရှားမှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1995; 74: 733-750 ။ [PubMed]
88 ။ et al Schoenbaum, G, ။ olfactory ခွဲခြားဆက်ဆံမှုသင်ယူမှုစဉ်အတွင်း orbitofrontal cortex နဲ့ basolateral amygdala အတွက်အာရုံကြော encoding က။ J ကို neuroscience ။ 1999; 19: 1876-1884 ။ [PubMed]
89 ။ Ramus SJ, Eichenbaum အိပ်ချ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကြွက် orbitofrontal cortex အတွက် olfactory အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်၏ဆက်နွယ်နေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 8199-8208 ။ [PubMed]
90 ။ Schoenbaum, G, Eichenbaum အိပ်ချ်အချက်အလက်များကိုကြွက် prefrontal cortex အတွက် coding ။ II ကို။ orbitofrontal cortex အတွက် Ensemble လှုပ်ရှားမှု။ J ကို Neurophysiol ။ 1995; 74: 751-762 ။ [PubMed]
91 ။ et al Lipton PA ဆိုပြီး။ ကြွက် orbitofrontal cortex အတွက် Crossmodal ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1999; 22: 349-359 ။ [PubMed]